Haddii Jidku kaa khaldamo! Dr. Cabdiraxman Baadiyow - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Maxaa Faatixada loogu celcelinayaa rakcad kasta? Faataxada waxa ku jira ducada ah “Ilaahow jidka toosan nagu hannuuni ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ”. Waxaa aqriyaa 17 jeer ruux kasta oo Muslim ah maalin kasta. Saacadaha isbeddelaya oo 24 saac kasta meel ka mid ah dunida ayaa salaad waxaa ku d tukada in ka badan hal bilyan Mulsim ah. Dhammaan waxay Ilaahay weydiistaan “Ilaahow waddada toosan nagu hannuuni” oo waddada khaldan inaan qaadno naga badbaadi. Qiyaastii, waa 17 bilyan of jeer maalin kasta oo daqiiqad kasta la aqrinayo ducadaas!!
Haddaba, ka warrama haddii ummad dhan oo Soomaali ah ay ka khaldantahay waddada saxda ee dawladnimadu? Haddii dad 20 milyan ka badan fikirka dawladnimadu ka khaldantahay? Haddii waddada ay ku socdaan ay khaldantahay, dhegahana ka fureystaan ruuxa isku daya inuu toosiyo? Haddii ay ku celcelinayaan waddadii khaldanayd sidii dad waalan oo kale, rajeynaayaanna in natiijo ficaan u soo baxdo? Bal ka warrama, ummad dhan oo Ilaahay ku salliday colaad iyo abaar oo si xishood la’aan oo joogto ah baryo iyo catow dhaqan ka dhigatay? Sidee Ilaahay u kaalmeynaya oo ducaadada u ajiibayaa haddii madaxdu xaaraan quutayaal noqdaan? Haddii hadalkoodu been yahay? Haddii salaaddu aanay reebin xumaanta iyo fuxshiga? Sow ma aha colaaddu iyo abaartu ciqaab Ilaahay? Bal eeg aayadda Qur’aanka oo sheegaysaa macnaha ah: “waxaan idinku imtixaaneynaa cabsi iyo gaajo… وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَىْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ” iyo sida Ilaahey ugu abaal sheeganayo Quraysh “caabuda Ilaaha gurigaan oo idinka quudiyay gaajada, idinkana nabadgeliyay cabsida.”. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ . Gabagabadii, haddii jidku kaa khaldanyahay, degdeg meelna kuma gaadhsiineyso!! Haddii jidku kuu saxanyahay, qunyar socod waa kuu gaadhsiinayaa meeshaad u socotay!